Ny fitaovana fandraketana an-tsarimihetsika maingoka China Manufacturer
Description:Misiônera Glass Glass Screen High Performance,High Microspheres Glass Performance,High Performance Reflective Micro Glass Beads
Home > Products > Sela Brilliant Glass > Ny fitaovana fandraketana an-tsarimihetsika maingoka
Model No.: Screen Materials Glass Microspheres
Ny endriky ny kofehy izay fehezina mandritra ny dingana famokarana dia ahitana ireo izay zavatra simika sy ara-batana. Ny singa simika sy ny vatan'ny kavina dia manana fiantraikany goavana amin'ny fomba ahafahan'ny jiro mitaratra ny hazavana. Ireo toetra ireo dia ahitana: ny haben'ny kofehy, ny dipoavatra mandrefesana, ny mazava, ny halavany.
Misiônera Glass Glass Screen High Performance
Ny haben'ny amboaram-bozaka iray dia mety hisy fiantraikany amin'ny fiverimberenana, indrindra amin'ny fepetra mando. Ny pila lehibe kokoa dia somary ambony kokoa ny reflexivity raha oharina amin'ny kirany maromaro ao ambanin'ny toetry ny maina. Mariho fa tsy misy fiantraikany amin'ny index refractive ny habeny. Raha mena ny marika, matetika dia tsy misy ilana azy ny kavina satria ny horonam-peo mandrakotra ny marika dia mahatonga ny hazavana hiparitaka alohan'ny hidirana ao amin'ny kofehy. Izany dia mahatonga ny marika mahamay ho tsy hita maso amin'ny alina. Ny kavina lehibe dia mety hahomby kokoa rehefa mivezivezy kely ny lalana satria ny sarin'izy ireo ambony dia mivoaka amin'ny alalan'ny horonam-peon'ny rano tsara kokoa noho ny jiro kely. Mariho fa rehefa mihamitombo ny elanelan'ny sarimihetsika, dia manomboka tsy mahomby ny kofehy lehibe.
High Microspheres Glass Performance
Index for Refractive
Ny endriky fiterahana (RI) dia singa iray amin'ny endriky ny akora simika ao amin'ny kavina, izay tapa-kevitra ny fitaovana ampiasaina hanaovana ny volombava. Ny avo kokoa ny mari-pandrefesana fatrana, ny hazavana misimisy kokoa dia hita taratra. Ny ankamaroan'ny kofehy ampiasaina amin'ny lalam-baravarankely manerana ny firenena dia manana sombin-taratasim-panafody 1.50. Ny labiera misy ny mari-pamantarana refy 1.50 dia natao avy amin'ny fitaratra misy ravin-trano. Ny penina misy endriny avo kokoa, ny 1.65 sy 1.90, dia vita avy amin'ny fitaratra virijiny ary manana endrika makiazy simika. Tsy dia ampiasaina matetika ny perila matroka avo lenta, satria lafo kokoa izy ireo ary mety haharitra kokoa noho ny 1.50 RI beads. Ny sampan-tserasera sasantsasany dia mampiasa mofomamy amin'ny endriny avo lenta sy ambany.
Fahamalinana sy fitoviana Ny fahamendrehana sy ny fihenam-bidy dia samy manana ny toetra tena manan-danja izay tsy maintsy manana ny kavina rehetra mba hamerenana ny hazavana. Ny fangatahana mangarahara sy fihenam-bidy dia azo hazavaina amin'ny alalan'ny fandinihana ny làlan'ny hazavana rehefa miditra ao amin'ny fehiloha voarakitra amin'ny marika. Tsy maintsy mangarahara ny jiro fitaratra mba hahatonga ny hazavana hamakivaky ilay tontolo. Ny fahamendrehana dia voakasika mafy amin'ny karazan-tsakafo ampiasaina. Ny kavina izay latsaky ny mangarahara mangarahara dia ampahany amin'ny hazavana tsy hiditra.
Ny elanelana boribory dia miteraka ilay tara-pahazavana
Manomboka eo amin'ny teboka etsy ambany izay nipoiran'ny kofehy ny loko.
Ny hazavana mamely ny ambim-bavon'ny ampongabendanitra ao amin'ny kofehy dia hita taratra
Miverina amin'ny lalan'ny fidirana. Ny fihenam-bidy dia misy fiantraikany lehibe amin'ny
fananana ao amin'ny lafaoro fipoahana. Ny kavina izay tsy ampy tsara
Ny fihodinana dia nahena nihena ny fananana.
Kitaposena vita amin'ny glasy ho fampiharana ny mari-pamantarana Contact Now
Sela Mpanjifa S-Brilliance ho an'ny Fibodoana ny Lakatoerana Contact Now
Sela Mpanjifa S-Brilliance ho an'ny Highway Marking Paint Contact Now
Kitapom-bolany fanontam-pirinty ho an'ny sary mihetsika Contact Now
Fitaovam-panamafisam-peo aforitra ho an'ny fanoratana fako Contact Now
Kitapo mivalona Glass Glasses amin'ny Paint Paint Thermoplastic Contact Now
Sla-brilliant Reflective Glasses ho an'ny Paint Traffic Contact Now
Misiônera Glass Glass Screen High Performance High Microspheres Glass Performance High Performance Reflective Micro Glass Beads High Glass Glasses Reflective Performance Sla Glass Glass S refleir Mikrôsfera Glass Line Glassing Brilliance Glass Glass Reflective Screen Perila Glass Glass Standard